သီတဂူဆရာတော်ကြီး နှင့် မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးဝီရသူ တို့တွေဆုံပွဲတွင်ပြောကြားချက် | Danya Wadi
»သတင်းများ»သီတဂူဆရာတော်ကြီး နှင့် မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးဝီရသူ တို့တွေဆုံပွဲတွင်ပြောကြားချက်
သီတဂူဆရာတော်ကြီး နှင့် မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးဝီရသူ တို့တွေဆုံပွဲတွင်ပြောကြားချက်
Posted by danyawadi on December 15, 2012 in သတင်းများ
Ko Mg Ko and7other people shared Chit Coco‘s photo.
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးက ရဟန်းသံဃာတော်တွေ လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြ မှုကို မကြိုက်ကြောင်း ၊ လက်မခံကြောင်း ၊အားမပေးကြောင်း ယနေ့ပြောကြားလိုက်ပြီ။
သီတဂူဆရာတော်ကြီး နှင့် မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးဝီရသူ တို့တွေဆုံပွဲတွင်ပြောကြားလိုက်ပြီ။
ထစ်ခနဲဆို လမ်းပေါ်ထွက်မဲ့အစား သံဃာတော် ထောင်ချီပါဝင်တဲ့ သံဃအစည်းအဝေးပွဲကြီး ဖြစ်အောင်လုပ်ကြ။ ပြီးတော့ အစည်းအဝေးပွဲဆုံးဖြတ်ချက် တွေကို သံဃာထောင်ချီ လက်မှတ်ထိုးပြီး သမ္မတဆီတင်ကြလို့ မိန့်ကြား လိုက်ပါတယ်။
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဦးဝီရသူ ကလည်း မိမိအနေဖြင့်လည်းလမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြမှုတွေကို မကြိုက်ပါကြောင်း သီတဂူ ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဦးညာဏိဿရ ကိုပြန်လည်လျောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးမစိုးရိမ်ဆရာတော်က လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတာဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေတွေကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေပြီး ဆူပူအကြမ်းဖက်မှု များအထိဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော် မတီကို ကူညီကြပါ။ ဝန်းရံကြပါ။ ယုံကြည်ကြပါ ။ အဖြေတစ်ခုထွက်သည်အထိ သည်းခံစိတ်ရှည်စောင့် ဆိုင်းပေးကြပါလို့ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။
ကဲ..မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရ ညဏ်ပညာကြီးမားတော်မှုကြသည့် ဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်တောင် အခုလိုမိန့် လာပြီဆိုတော့…. ဆရာတော်၊သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့ သေချာစဉ်းစားတော်မှုကြပါဘုရား။
ပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းပြည် အကျိုးကို တကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင် ဆရာတော်ကြီတွေရဲ့ စကားကို လိုက်နာကြပြီး လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတဲ့အလုပ်တွေကို ရပ်လိုက်ကြပါတော့ဘုရား။
အထက်ပါ သီတင်းနဲ့ အမေးအဖြေတွေကို DVB သီတင်းမှာ ယနေ့ညနှင့် မနက်ဖြန်တစ်ရက်လုံးကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း ………..။
ထစ်ခနဲဆို လမ်းပေါ်ထွက်မဲ့အစား သံဃာတော် ထောင်ချီပါဝင်တဲ့သံဃာ့အစည်းအဝေးပွဲကြီး ဖြစ်အောင်လုပ်ကြ။
(သီတဂူဆရာတော်ကြီး နှင့် မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးဝီရသူ တို့တွေဆုံပွဲတွင်ပြောကြားချက်)
သီတဂူဆရာတော်ကြီး နှင့် မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးဝီရသူ တို့တွေဆုံပွဲတွင်ပြောကြားလိုက်ပြီ။
ထစ်ခနဲဆို လမ်းပေါ်ထွက်မဲ့အစား သံဃာတော် ထောင်ချီပါဝင်တဲ့ သံဃအစည်းအဝေးပွဲကြီး ဖြစ်အောင်လုပ်ကြ။ ပြီးတော့ အစည်း အဝေးပွဲဆုံးဖြတ်ချက် တွေကို သံဃာထောင်ချီ လက်မှတ်ထိုးပြီး သမ္မတဆီတင်ကြလို့ မိန့်ကြားလိုက် ပါတယ်။
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဦးဝီရသူ ကလည်း မိမိအနေဖြင့်လည်းလမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြမှုတွေကို မကြိုက်ပါကြောင်း သီတဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးညာဏိဿရ ကိုပြန်လည်လျောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးမစိုးရိမ်ဆရာတော်က လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတာဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေတွေကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေပြီး ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများအထိဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးကော် မတီ ကို ကူညီကြပါ။ ဝန်းရံကြပါ။ ယုံကြည်ကြပါ ။ အဖြေတစ်ခုထွက်သည်အထိ သည်းခံစိတ် ရှည်စောင့် ဆိုင်းပေးကြပါလို့ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးကို မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။(အထက်ပါ သတင်းနဲ့ အမေးအဖြေတွေကို DVB သီတင်းမှာ ယနေ့ညနှင့် မနက်ဖြန်တစ်ရက်လုံးကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း ………..။)အေးချမ်းမွန်မှ Thit Sar တွင်ဖော်ပြသော သတင်းကို မူရင်းအတိုင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Photo From :Thit Sar
← လူကုန်ကူးမှုအားလုံး၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ မြန်မာမိန်းကလေးများ တရုတ်မယား လုပ်ရန် ပို့ဆောင်ပေး
HIV ပိုးကို အသုံးပြု၍ သွေးကင်ဆာရောဂါ အောင်မြင်စွာကုသနိုင်ခဲ့ →
One comment on “သီတဂူဆရာတော်ကြီး နှင့် မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးဝီရသူ တို့တွေဆုံပွဲတွင်ပြောကြားချက်”
Ha Haa Harr December 15, 2012 at 5:46 pm	Reply
ဟ…..မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးဝီရသူက အခုတော့ပြောပြီ
ရဟန်းသံဃာတော်တွေ လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြ မှုကို မကြိုက်ကြောင်း ၊ လက်မခံကြောင်း ၊အားမပေးကြောင်း ပါတဲ့
အခုတော့ သီတဂူ ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဦးညာဏိဿရ ကိုပြောနေတာကြည့်ပါလား။
လုပ်ပါအုံး သမ္မတဦးသိန်းစိန်(အမှန်) ကင်တားနား(x) ဆိုပြီးတော့